Hafa | Tianjin Yixin Pipe Equipment Co., Ltd.
Ampiasao betsaka amin'ny milina fantsom-pilazo YIXIN mandeha ho azy
Fitaovana fantsom-bozaka mandeha ho azy dia be mpampiasa amin'ny fantsom-bozaka flange, fantsom-bozaka mahitsy ary fantson-drano fantsom-panafody.
Ny milina fantsom-bozaka YIXIN dia tsy mety amin'ny fantsom-bozaka sy fantsom-bozaka fotsiny, fa koa amin'ny fantsom-bozaka, fantsom-bozaka ary fametahana seam mahitsy. Tsy mety amin'ny fantsona fantsona an-tany sy ambanin'ny tany ihany izy io, fa koa ampiasaina amin'ny fantsom-panafihana avo lenta toy ny fantsom-panafody. Ho fanampin'izany, dia mety ihany koa ho an'ny welding ny hatevin'ny rindrina isan-karazany, kely toy ny 5mm ary lehibe tahaka ny 100mm dia mety hahatratra welding tsara. Fitaovana fampiasa amina be mpampiasa be io.
Lasary paipaika matevina
HW-ZD-200 ampiasaina hiadiana amin'ny paompy matevina 85mm Miaraka amin'ny taha 100%
Amin'ny maha vokatra ambony an'i YIXIN azy, HW-ZD-200 dia nampiasaina tamin'ny fantson-drano fantsona faran'izay matevina miaraka amin'ny hatevin'ny rindrina 85mm ary nahitana vokatra tonga lafatra. Fahombiazana mamy ho an'ny welding matevina amin'ny rindrina ao an-trano sy any ivelany.
Tamin'ny volana jona 2020, tetik'asa fanavaozana feno ny faritra atsimo amin'ny renirano no niditra am-piomanana vonjy maika. Ny vodin-kazo ambanin'ny vavahadin-tserany mitondra fiara dia fantsom-pandrefesana faran'izay matevina miaraka amin'ny savaivony 2000mm ary 85mm ny hatevin'ny rindrina. Ny tetikasa welding dia nanjary olana lehibe tamin'ity tetikasa ity, ary mazava ho azy fa ny famahana an'io olana io no lasa laharam-pahamehana indrindra amin'izao fotoana izao.
Taorian'ny fitsirihana maro, ny mpanjifa dia liana tokoa amin'ny milina fantsom-pandrefesana fantsona HW-ZD-200 an'ny orinasanay.
Ny Institute Quality Standards Institute an'ny minisiteran'ny rano dia nikarakara fivoriana manokana niaraka tamin'ny manam-pahaizana manokana avy amin'ny orinasa mpifaninana rehetra amin'ny tetikasa mba hanaovana dinika lalindalina momba ny fahaizan'ny fomba fantson'ilay milina fantsom-panazavana feno toerana ary farany nanapa-kevitra ny hampiasa ny fitaovana HW-ZD-200 an'ny YIXIN hitarika fanangonana data sy fikajiana mari-pahaizana momba ny fomba fikajiana.
Ity fitsapana fantsona fantsom-by ity dia matevina tanteraka. Eo ambanin'ny fepetra miasa mafy, ny HW-ZD-200 dia mandeha tsara sy tsara, tsy misy fiatraikany ratsy toy ny fampitandremana tsy fahatapahana hafanana be loatra, ary kely ny fidiran'ny mpandraharaha. Taorian'ny fantsom-panandramana, teo ambanin'ny fijoroan'ny vavolon'ny mpanjifa, nanasa orinasan-tserasera mpitsidika iray matihanina izahay hitarika ny fanaraha-maso kalitao amin'ny vakana, ary nandalo tamin'ny fomba tsara ny fizahana tsy misy fanimbana ultrasonic sy dingana. Ary farany, ny mpanjifa dia nividy ny fitaovana HW-ZD-200 an'ny orinasanay ho toy ny fantsom-by ho an'ity tetikasa ity
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1 Aogositra 2020 ny tetikasa, ary ny mari-pahaizana momba ny savaivony dia ny DN2000 * 70mm ary DN1500 * 80mm. Vita tamin'ny tapaky ny volana oktobra ny welding ary mbola mitohy ny tetikasa. Ny lasitra vita dia voasedra noho ny fitadiavana lesoka. Hatramin'izao, ny valim-panadinana dia manana taha ambony ary neken'ny tompony sy ny antoko fananganana izany.
Lasary fantsona matevina
Welding Sodina Noromal